सुपर चाकू मास्टर एपीके एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [खेल] - लुसो गेमर
डिसेम्बर 24, 2021 by जोन स्मिथ
हल्का वजन र स्रोतहरूको कम खपतको कारणले अनौपचारिक खेलहरू सबैभन्दा मनपर्ने अनलाइन गेमहरू मानिन्छ। यसको मतलब त्यस्ता गेमहरू दुवै नयाँ र पुरानो स्मार्टफोनहरूमा सजिलै स्थापना गर्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईलाई अनौपचारिक खेलहरू खेल्न मन पर्छ त्यसपछि सुपर चाकू मास्टर स्थापना गर्नुहोस्।
अनुप्रयोगको नवीनतम संस्करण प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न पहुँचयोग्य छ। यद्यपि धेरै एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरू अनुकूलता समस्याहरूको कारण यहाँबाट गेमप्ले डाउनलोड गर्न असमर्थ छन्। यद्यपि हामी निश्चित छैनौं कि यो समस्या किन भइरहेको छ।
किनभने गेमिङ एप सबै एन्ड्रोइड स्मार्टफोनका लागि योग्य छ। जे होस्, जो यस समस्याको अनुभव गर्दै छन्, बारम्बार, हाम्रो वेबसाइटमा जानुपर्छ र नवीनतम एपीके फाइल नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुपर्छ। यदि तपाइँ गेमप्ले मनपर्छ भने यसलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्।
सुपर चाकू मास्टर Apk के हो
सुपर नाइफ मास्टर एन्ड्रोइड कुनै पनि प्रयोगकर्ताद्वारा संरचित अनलाइन प्लस अफलाइन क्याजुअल गेमिङ एप हो। गेमप्ले सबै एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूलाई फोकस गरेर संरचित गरिएको छ। या त गेमरहरू पुरानो वा नयाँ एन्ड्रोइड स्मार्टफोन समातिरहेका छन्।
तिनीहरूले कुनै पनि अनुमति वा दर्ता बिना गेमप्ले स्थापना गर्न मजा लिन सक्छन्। यस समय सम्म, गेमप्लेले एक सहज 2D डिस्प्ले प्रदान गर्दछ जसले सरल गतिशील ड्यासबोर्ड प्रदान गर्दछ। जहाँ अनलक भएका चक्कुहरू विभिन्न दिशामा सर्नेछन्।
आधिकारिक विकासकर्ताहरूका अनुसार, गेमप्लेले फुर्सदमा समय बिताउने यो उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्न सक्छ। गेमप्ले मन पराउनेहरूले पनि अब अन्य परिचित साथीहरूलाई आमन्त्रित गर्न सक्छन्। केवल एक रेफरल लिङ्क उत्पन्न गर्नुहोस् र सजिलै संग अरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस्।
आक्रमण गेमर द्वारा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यो चक्कुहरू यसरी कोड गरिएका हुन्छन् जसले बलमाथि स्वचालित रूपमा आक्रमण गर्नेछ। खेलाडीहरूले मात्र गति र आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सक्छन्। यदि तपाइँ खेल्ने सीपहरू जाँच गर्न तयार हुनुहुन्छ भने स्थापना गर्नुहोस् थ्रीडी खेल.
नाम सुपर चाकू मास्टर
आकार 63 एमबी
विकासकर्ता कुनै पनि प्रयोगकर्ता
प्याकेज नाम com.crush.knife.burst.frenzy
आवश्यक एन्ड्रोइड 4.1 र माथि
जब यो खेल खेल्न आउँछ, तब यो धेरै सरल छ। ड्यासबोर्ड भित्र धेरै पहुँचयोग्य नि: शुल्क सुविधाहरू स्वचालित मोडमा राखिएको छ। यसको मतलब गेमरहरूलाई ती विशेष मोडहरू सक्षम गर्ने बारे सोच्न आवश्यक छैन।
पसल भित्र, विभिन्न चक्कु र ब्लेडहरू राखिएको छ। अब ती ब्लेडहरू र चक्कुहरू अनलक गर्नाले बलहरू तोड्न मद्दत गर्नेछ। विभिन्न टिकटहरू र स्रोतहरू अनलक गरेर सार्ने प्रक्रियालाई बढावा दिन सकिन्छ।
बलहरू तोड्दा रत्नहरू सङ्कलन गर्न मद्दत गर्नेछ। पछि कमाइएका रत्नहरूले तपाईंको आक्रमणको शक्ति निर्धारण गर्नेछ। यसबाहेक, कमाईएको हीरा जाँच गरेपछि विश्वव्यापी वरीयता व्यवस्थित गरिनेछ। यदि तपाईंले रत्नहरू कमाउनु भयो भने बोर्डमा तपाईंको रैंक स्वतः सुधार हुनेछ।
कार्यहरू पूरा गर्न र स्तरहरू सुधार गर्नाले विभिन्न शक्तिशाली हतियारहरू अनलक गर्न मद्दत गर्दछ। एकचोटि तपाईंले ती शक्तिशाली हतियारहरू अनलक गर्न सफल हुनुभयो। त्यसोभए तपाईलाई नम्बर बन्नबाट रोक्न सक्ने शक्ति छ।
हामीले खेल भित्र भेट्टाएको मात्र समस्या तेस्रो पक्ष विज्ञापनहरू हो। तर विज्ञापनहरू हेर्दा स्रोतहरू दोब्बर वा तीन गुणा बढाउन मद्दत गर्नेछ। यसबाहेक, ती मुख्य ड्यासबोर्डबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं साथीहरूसँग खेल खेल्न तयार हुनुहुन्छ भने सुपर चाकू मास्टर डाउनलोड स्थापना गर्नुहोस्।
खेल डाउनलोड गर्न नि: शुल्क।
विभिन्न चक्कुहरू अनलक गर्नुहोस्।
सुनको सिक्का कमाउनुहोस्।
हतियार अपग्रेड गर्न कमाईएको सिक्का प्रयोग गर्नुहोस्।
तर ती हेर्दा विभिन्न स्रोतहरू अनलक गर्न मद्दत गर्नेछ।
गेमप्ले इन्टरफेस सरल छ।
सुपर चाकू मास्टर गेम कसरी डाउनलोड गर्ने
हामीले पहिले नै उल्लेख गरेझैं अहिले गेमिङ एप प्ले स्टोरबाट पहुँच गर्न सकिने छ। तर धेरै एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई सीधा डाउनलोड गर्न असमर्थ छन्। किनभने तिनीहरूले खेल डाउनलोड गर्दा धेरै त्रुटिहरू अनुभव गर्छन्।
कारण फरक हुन सक्छ। त्यसोभए यस्तो परिदृश्यमा एन्ड्रोइड गेमरहरूले के गर्नुपर्छ? तसर्थ तपाईं एपीके डाउनलोड गर्नको लागि अनलाइन प्रामाणिक स्रोत खोज्दै हुनुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा हामी केवल मूल फाइलहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
हामीले उपलब्ध गराएको गेमिङ एप विभिन्न एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूमा पहिले नै इन्स्टल गरिएको थियो। गेमप्ले स्थापना गरेपछि, हामी भित्र कुनै पनि गम्भीर समस्या देख्न असमर्थ छौं। त्यसैले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले चिन्ता नगरी खेल स्थापना गर्न सक्छन्।
हामीले पहिले नै धेरै अन्य अनौपचारिक गेमिङ एपहरू प्रकाशित गरिसकेका छौं जुन सम्बन्धित छन्। ती 2D खेलहरूको मजा लिन कृपया निम्न एपहरू स्थापना गर्नुहोस्। जो हुन् Gacha क्लब संस्करण Apk र रेनी एटिक कोठा एपीके.
यसैले तपाईंलाई अनौपचारिक गेमिङ एपहरू खेल्न र नयाँ खोजी गर्न मनपर्छ। त्यसपछि हामी एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूलाई Super Knife Master Apk स्थापना गर्न सिफारिस गर्छौं। त्यो हाम्रो वेबसाइटबाट एक क्लिक विकल्पको साथ निःशुल्क डाउनलोड गर्न पहुँचयोग्य छ।
विभाग आकस्मिक, खेल ट्याग थ्रीडी खेल, सुपर चाकू मास्टर, सुपर चाकू मास्टर एपीके, सुपर चाकू मास्टर डाउनलोड, सुपर चाकू मास्टर खेल मेल अन्वेषण
बिलिबिली कमिक्स एपीके एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [मंगा कथाहरू]